Posted by ကို Tranquillus | စက်တင်ဘာ 14, 2018 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
တစ်ဦးတင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကူးတစ်ခုပရိသတ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းအမြဲနှုတ်ဆက်သွယ်ရေးကတဆင့်သွားပါ, ဒါပေမယ့်လည်းရန် gestures ဆက်သွယ်ရေး။ သင်သည်သင်၏ပရိသတ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မလိုအပ်ခံယူချက်၏ခွန်အားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်သင်အဲဒီမှာ get ပေမယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျတခုအနုပညာ, တစ်စက္ကန့်သဘောသဘာဝအဖြစ်ခံယူချက်သင့်ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ခံယူချက်သင့်ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုကဒီမှာလေ့လာပါ။
အဘယျ "စည်းရုံးသိမ်းသွင်း" ပါသလဲ?
အဘိဓာန်အဆိုအရ "စည်းရုံးသိမ်းသွင်းအဖြစ်စစ်မှန်တဲ့သို့မဟုတ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုအသိအမှတ်မပြုရန်, အကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်သက်သေအထောက်အထားအသုံးပြုပုံတစ်စုံတစ်ဦးကဆောင်ကြဉ်းဖြစ်ပါတယ်။ "။
ဒါကြောင့်သင်ကဥပမာသို့မဟုတ်သက်သေအထောက်အထားကထောက်ခံသည်သင်၏အတွေးအခေါ်များသို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှုများကိုတင်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သှေးဆောငျ၏အနုပညာ အမှန်ပင်အထူးသဖြင့်ပါတီနှစ်ခုအကြားသဘောတူညီမှုညှိနှိုင်းအတွက်, စီးပွားရေးဘဝ၌ရှိသကဲ့သို့ကုန်သွယ်ရေး၌ကြီးသောအရေးပါမှုရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
သစ်တစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတင်ဆက်မှု, သင့်စိတ်ကူးများကိုအမြဲအချို့သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့မဟုတ်သင့်ထက်သာလွန်ကနေအတိုက်အခံနှင့်အတူရင်ဆိုင်နေကြပါလျှင်ထိတ်လန့်ခံရဖို့မလိုပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း အသစ်သောအတွေးအခေါ်များမှခုခံတစ်ခု universal အဘိဥာဏ်ယန္တရားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအစားထိုးသည်ငြင်းပယ်ခံရဖြစ်စဉ်များအစဉ်အမြဲပေါ်လာပါသည်။ Anti-rejection မူးယစ်ဆေးဝါးများခန္ဓာကိုယ်ကအဂတိလိုက်စားမှုငြင်းပယ်ခံရကာကွယ်တားဆီးဖို့သတ်မှတ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
ဤငြင်းပယ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်လူအများစုအမှားများကိုရှောင်ရှားရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ ပထမတင်ပြချက်မှအခြားသူများအားသူတို့၏အတွေးအမြင်များကိုသူတစ်ပါးအားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းခြင်း။ အမှန်မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းတင်ဆက်မှုသည်အကျိုးဆက်များနှင့်ငြင်းခုန်။ ၎င်းပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပထမ ဦး ဆုံးတင်ဆက်မှုအတွက်လုံလောက်သည်။ အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းငြင်းပယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီအဆင့်ကိုအနည်းဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
ဖတ်ရန် ကောင်းစွာရေးသားခြင်း, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှု!
သင့်ရဲ့စိတ်ကူးများသက်ဆိုင်ရာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အဲဒါကိုစုပ်ယူမထားစိတ်ဝင်စားဘို့ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ပိုပြီးအလွယ်တကူဒုတိယတင်ဆက်မှုအပြီးသင့်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံမည်ဟုတော်မူသောသင်တို့အဆက်အသွယ်၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်း၏အလုပ်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်စီမံကိန်းတွေလုပ်မခံရမီစာနယ်ဇင်းမှဆက်သွယ်နေကြသည်သောဤအလငျး၌ဖြစ်၏အစိုးရ၏, သိနားလည်ကြ၏။ အဆိုပါလူဦးရေထို့နောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလကျခံဖို့ကပိုဆန္ဒရှိကြလိမ့်မည်။
သှေးဆောငျ technique ကိုငါးခုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီ
ယုံကြည်ချက်လိုပဲ, သင့်တင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပရိသတ်ကိုအားဖြင့်သင့်စီမံကိန်းအတွက်တွန်းအားပေးရန်သှေးဆောငျဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်သိက္ခာမဲ့ရှိစေခြင်းငှါ၎င်းကိုင်တွယ်မတူဘဲ, ခံယူချက်နှင့်သှေးဆောငျအမြဲအမှန်တရားရဲ့ဘက်မှာဖြစ်ရပါမည်။ ဤတွင်သှေးဆောငျသို့မဟုတ်ယုံကြည်ချက်ရရှိအချို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ amplification အယူအဆ
သင့်ရဲ့စိတ်ကူးများချဲ့ထွင်လိုက်ပါကစိတ်ခံစားမှု, ယဉ်ကျေးမှု, ကျင့်ဝတ်ဖြစ်, သင့်အင်တာဗျူးသို့မဟုတ်ပရိသတ်ကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုရှိမဆိုကြားဆက်ဆံရေးမိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် ...
မူအရ, ဒီသီအိုရီကိုတင်ပြခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင်ပြည့်စုံသက်ဆိုင်ရာနှင့်စစ်မှန်သည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြပြီးသင်ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်နှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုသက်ဆိုင်ရာကြောင်းကိုသက်သေထူတယ်။
ဒါကသီအိုရီအယေဘုယျအားဖြင့်အများပြည်သူအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေတဲ့မှတ်ဉာဏ်ရန်သင့်စိတ်ကူးလင့်ထားသည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့အလားအလာများနံနက်စာကလေးဘဝ evoking နို့ရောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဤသည်ကို "အပြန်အလှန်" အဖြစ်ပေမယ့်မသိစိတ်အတွင်းတူညီမူအရဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ပရိသတ်ကိုသင့်ရဲ့စိတ်ကူးသို့မဟုတ်အဆိုပြုချက်ကိုမှစေ့စေ့နားထောင်ဖြစ်လိုပါက၎င်းတို့၏မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အာရုံစိုက်။
ပိုပြီးအရာတစ်ခုခုကပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်, ရှားပါးကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ အခုတော့သငျသညျ၎င်းငျး၏ဆက်စပ်မှုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကျေနပ်အောင်သို့မဟုတ်သင့်အဆက်အသွယ်များ၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှ၎င်း၏စွမ်းရည်သရုပ်ပြဖို့ရှိသည်။
ဟုတ်သည် SET ၏ technique ကို
အခုဆိုရင်သင်ဤသည်အဘယ်အရာပိုကောင်းနားလည်ကြောင်း, ဒီကိုအလွယ်တကူယခင်ကပေးအပ်သည့် amplification အယူအဆတွေနဲ့ဆက်နွယ်သော technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက SET ဟုတ်သည်သူ၏အဖြေကိုယုတ္တိနည်း "Yes" ဖြစ်လိမ့်မည်မေးခွန်းတွေဆက်တိုက်မေးပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်ဒီဆက်ခံမယ့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝိညာဉျတျောထဲမှာခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်အများပြည်သူတတ်၏။ ဤသည်အေးစက်ဟုခေါ်သည်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုသင်ယခင်ကဟုမေးထားသောမေးခွန်းများကိုနှင့်အညီဖြစ်သကဲ့သို့ကြောင့်အတည်ပြုဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုယူဆရသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နိယာမ၏ဤအေးစက်, တစ်စုံတစ်ဦးကအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖို့ "Yes" လို့ပြောရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရသင်၏စီမံကိန်းများကိုတင်ပြသည့်အခါသင်၏အကြံဥာဏ်များမည်မျှပင်အရေးပါသည်နှင့်မည်သည့်အငြင်းပွားမှုများကိုတင်ပြသည်ဖြစ်စေ၊ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောနည်းဖြင့်ရွတ်ဆိုပါကသင်၏တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူသို့မဟုတ်ပရိသတ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အခွင့်အလမ်းနည်းလိမ့်မည်။ ပိုမိုလွယ်ကူစွာပြောရမည်ဆိုလျှင်ကွန်တိန်နာသည်အကြောင်းအရာကဲ့သို့အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာဆက်သွယ်မှုသည်နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်သော ၈၀-၉၀% ဖြစ်သည်။ နားထောင်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပြောနေသည့်အရာအားယုံကြည်စိတ်ချမှသာသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ကြောင်းသတိရပါ။
တစ်ဦးအပြုသဘောခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားထားရှိခြင်းထက်ပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းဖော်ပြမဆိုလိုပါ။ ဤသည်သင်၏စကားတွေနဲ့ကိုက်ညီသင့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်သည်သင်၏ပရိသတ်ကိုလိုချင်တာတွေစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအခွအေနအဘို့အသင့်လျော်သည်အရေးကြီးပါသည်။ သင်ပိုမို layoffs ကြေညာဖို့ရှိပါကဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်စိတ်အားထက်သန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဖတ်ရန် အဆိုပါနာမည်ကြီးစာလုံးပေါင်းပြိုင်ပွဲသည် Project မှဗော်တဲယားကိုသင်ရထား
သငျသညျပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသည်ဖို့သင့်ရဲ့တင်ဆက်မှုများအတွက်ဂရုတစိုက် ပြင်ဆင်. ,
သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကို Utopia ၏ဒိုမိန်းအတွင်းအလွယ်တကူမှီဖြစ်ကြပြီးမဟုတ်သေချာအောင်လုပ်ပါ,
သင့်ရဲ့တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်းပြုံး, သင့်ပရိသတ်ကိုကောင်းစွာသင်ဆုချပါလိမ့်မယ်နှငျ့သငျနားထောငျဖို့ကပိုလိုဖြစ်လိမ့်မည်။ မှန်ရှေ့မှာမှမီးရထား,
သင်သည်သင်၏ပထမ, ဒုတိယသို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲတင်ဆက်မှု၌ရှိကြ၏ပဲဖြစ်ဖြစ်, ရလဒ်များနှင့်ခံယူချက်သင့်ရဲ့ပါဝါ၏ဆင့်ကဲအဘို့မှာအောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်သေချာစေပါ။ ဒါကြောင့်သင်တိုသမျှစီမံကိန်းအမှုအရာပိုကောင်းစေနဲ့အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု hone နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ခံယူချက်၎င်း၏အင်အားကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? နိုဝင်ဘာလ 25th, 2018Tranquillus